Progressive Voice Myanmar » နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားသတ်မှတ်ချက်နှင့်ပါတ်သက်၍ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
Home Resources Statements နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားသတ်မ�...
Statement 279 Views
January 9th, 2021 • Author: Assistance Association for Political Prisoners • 1 minute read
ရက်စွဲ။ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သော နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ထည့်သွင်းဖြေကြားခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုသည့် သတ်မှတ် ပြောဆိုချက်သည် လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲနှင့် အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးအပေါ် တစုံတရာအကျိုးမပြုနိုင်သည့်အပြင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းနှင့်လည်း ကိုက်ညီမှုမရှိသည့်အတွက် ယခုထက်ပိုမို ကျယ်ပြန့်ပြည့်စုံစွာ ပြန်လည်သုံးသပ် စဉ်းစားသင့်ကြောင်း မိမိတို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှ အလေးအနက် တိုက်တွန်းတောင်းဆို အပ်ပါသည်။
အစိုးရအဆက်ဆက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုသည့်စကားရပ်အား တရားဝင်သုံးနှုန်းရန် အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုးဖြင့် ငြင်းပယ်ခဲ့သော်လည်း အကျဉ်းထောင်များတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ခေတ်အဆက်ဆက် အကျဉ်းချခံခဲ့ကြရသည်မှာ မဝေးလှသေးသည့် သမိုင်းဆိုင်ရာအမှန်တရားတခု ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူများအား အကျဉ်းထောင်များအတွင်းတွင် အထူးအကျဉ်းသား၊ သီးသန့်အကျဉ်းသားများ အဖြစ်ကန့်သတ်၍ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ ပိုမိုတင်းကျပ်စွာ သတ်မှတ်စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ လျှော့ရက်များ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ မိသားစုနှင့် ဝေးကွာသည့်ဒေသရှိထောင်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ အကျဉ်းထောင်သို့ မရောက်မီ ပြင်းထန်စွာ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်းတို့ကို အာဏာပိုင်များက အစီအစဉ်တကျ ဖိနှိပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
မိမိတို့အေအေပီပီအဖွဲ့အနေဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် အနှစ် ၂၀ ကျော်ကာလမှစတင်၍ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတို့အတွက် နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးဖြင့် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရင်း ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခဲ့ကြသူများအား နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ် လက်ခံ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါသည်။ တဆက်တည်းတွင် အကျဉ်းထောင်များအတွင်း ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မခံရစေရေးနှင့် ၎င်းတို့ရသင့်ရထိုက်သည့် အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝရရှိစေရေးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပအင်အားစု အားလုံးနှင့် လက်တွဲကာ အစဉ်တစိုက် ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အရေး ဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဥပဒေပညာရှင်များ၊ တသီးပုဂ္ဂလများ စုစည်းဆွေးနွေး၍ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို အနီးစပ်ဆုံး ကိုက်ညီအောင် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၈)ရက်နေ့၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်အရ ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုအပေါ် ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေး အရေးယူခံရသူများ ဆိုသည့် ပြောဆိုချက်သည် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်းပြောဆိုချက်နှင့် တူညီနေသည်ဖြစ်ရာ ယခုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောထားဟု ယူဆနိုင်ဖွယ်ရာရှိပါသည်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးစာတမ်းသည် လူတိုင်း၏ မွေးရာပါအခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်ခွင့် များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန် ပြဌာန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ကို ဥပဒေက အကာကွယ်ပေးရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် များစွာလိုအပ်နေခြင်းကြောင့် ပြည်သူရွေးချယ်ထားသော အစိုးရလက်ထက်တွင် ဥပဒေများကို ပြန်လည်စိစစ် ပြင်ဆင်ရန် ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်တွင် တချိန်က နာမည်ဆိုးပုဒ်မများဖြစ်သည့် ၅ (ည)၊ ၁၀ (က) (ခ) စသည်တို့အား ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ထို့ပြင် ကျန်ရှိသည့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား သုံးရာကျော်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့ပြီး ယခင်အစိုးရများ ထားရှိခဲ့သည့် ပြစ်ဒါဏ်ကြွင်းကျန်ခံဝန်ကတိများအား ဖျက်သိမ်းပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုလုပ်ဆောင်မှု များအား ဒီမိုကရေစီရေးအပြောင်းအလဲအတွက် အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်ကျဉ်းမှုများအဖြစ် အပြည့်အဝ ကြိုဆိုအပ်ပါသည်။
သို့သော်လက်ရှိအချိန်တွင် ငြိမ်းစုစီဥပဒေ၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကာကွယ်သည့်ဥပဒေစသည်တို့ကဲ့သို့ ပြည်သူတို့၏အခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ပြဌာန်းခဲ့သည့်ဥပဒေများသည်ပင် ပြည်သူတို့အား ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆို ထောင်ချရန် အများဆုံးအသုံးပြုသည့် ဥပဒေပုဒ်မများဖြစ်နေသည်ကို စိတ်မကောင်းစွာ တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ပြင် အကြမ်းဖက်မှုဥပဒေဖြင့် အရပ်သူအရပ်သားများ ဖမ်းဆီးစစ်ဆး ခံနေရခြင်းများလည်း တိုင်းရင်းသားဒေသအများအပြားတွင် ရင်ဆိုင်နေကြရပါသည်။
ယနေ့ကာလသည် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို အခြေခံကာ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်နေသော အလွန်အရေးကြီးသည့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေတရပ်ကို ဖြတ်သန်းနေရသည့် ကာလတရပ်ဟုဆိုနိုင်သည်။ ထိုအချိန်မျိုးတွင် ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ နိုင်ငံတကာမိသားစု၏ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကူညီမှုများမှာလည်း မလွဲမသွေလိုအပ်ချက်တရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အစိုးရ၏ စီမံကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှုများသည် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနှင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများအား လိုက်နာရန်လိုအပ်သကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လည်း ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲနေမှုများ မရှိသင့်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
အစိုးရမှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို တရားဝင် မသတ်မှတ် နိုင်သေးသရွှေ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားသတ်မှတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက်၍ အငြင်းပွား နေဦးမည်သာဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် နိုင်ငံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သဘောထားများပါဝင်သည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို အစိုးရအနေဖြင့် တရားဝင်သတ်မှတ်နိုင်ရန် အမြန်ဆုံးကြိုးစားဆောင်ရွက် ပေးပါရန် မိမိတို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းက အလေးအနက် တိုက်တွန်း လိုက်ပါသည်။
သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်အား PDF ဖြင့်ဒေါင်းလော့ရယူရန်
For English version.
၂၅၊ ဇွန်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အေအေပီပီအဖွဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှ ရရှိလာတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ (FPPS) တို့သည် အခြား မဟာမိတ်အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း၍ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတခုအား ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့နှင့် ၁၈ ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အဓိပ္ပာယ်ကို သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။
မည်သူမဆို၊ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ တန်းတူညီမျှမှု၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်သည့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတို့အတွက် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အားပေးကူညီခြင်း၊ ပူးပေါင်းကြံစည်ပါဝင်ခြင်း၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်ခြင်းတို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြစ်မှုကြောင်းအရဖြစ်စေ၊ တရားမကြောင်းအရဖြစ်စေ ဖမ်းဆီး၊ထိန်းသိမ်း၊ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူများ အားလုံးကိုလည်းကောင်း၊
ထို့အပြင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အရဖြစ်စေ၊ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေ ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာသော မဏ္ဍိုင် (၃)ရပ်နှင့် လုပ်ငန်းအဖဲ့ွများ (သို့မဟုတ်) ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၏ ရပ်တည်ချက်၊ ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ စုပေါင်း၍ဖြစ်စေ၊ ကန့်ကွက်ခြင်း၊ ဟောပြောခြင်း၊ ရေးသားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခြင်း၊ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခြင်း၊ မကျေနပ်ကြောင်း၊ ကန့်ကွက်ကြောင်းကို အခြားပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုခုဖြင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အားပေးကူညီခြင်း၊ ပူးပေါင်းကြံစည်ခြင်း၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်ခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ပြစ်မှုကြောင်းအရဖြစ်စေ၊ တရားမကြောင်းအရဖြစ်စေ ဖမ်းဆီး၊ထိန်းသိမ်း၊ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူများ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟုသတ်မှတ်သည်။